Iprofayile yeNkampani-Shenzhen J.able Bio Co., Ltd.
Isekwe ngo-2014, i-Shenzhen J.able Bio Co., Ltd., ikwi-Special Economic Zone yase-China, isixeko esiziko loqoqosho lwesizwe kunye nesixeko samazwe ngamazwe-i-Shenzhen, ehlala kwindawo ye-2000 square metres, kuquka i-GMP factory ene-Class 100,000 ecocekileyo. amagumbi kunye ne-10,000 Lab, igumbi lokulawula eliqinisekileyo, igumbi elinyumba, igumbi elilinganiselwe le-microbial, inkqubo yamanzi acocekileyo yonyango.
I-J.able ikhethekileyo kwizinto zonyango ezifana ne-microbiological specimen collection kunye nezisombululo zezothutho, izisombululo ezisetyenziswa kwilabhoratri, izisombululo ze-swab ezicocekileyo.
Ukuqokelelwa komzekelo weMicrobiological kunye nezisombululo zokuthuthwa: Ikhithi yovavanyo lweDNA, i-oropharyngeal kunye ne-nasopharyngeal swab, iswab efukelwe yinayiloni, irayon edadayo, i-foam/rayon swab, isampulu ye-HPV yomlomo wesibeleko, ityhubhu yesampulu yentsholongwane elahlwayo, ikiti yokuqokelelwa kwamathe, i-in vitro eyona zixhobo zokuxilonga. esetyenziselwa uvavanyo lwemfuzo, i-bio-pharmaceuticals, izibhedlele, iZiko loLawulo lweSifo kunye noThintelo, i-reagent yokuxilonga kunye nesampulu ye-forensic njl.
Izisombululo zeLabhoratri ezisebenzisekayo: i-cryogenic vial, ityhubhu ye-centrifuge, ipayipi yokudlulisa, i-inoculating loop, ityhubhu yesampula, ibhokisi yefriji ye-PC, njl njl. UJ.able useke umgca wemveliso wokubumba iplastiki: ugxininise kuphando, uphuhliso kunye nokuveliswa koluhlu lweemveliso zeplastiki. efunekayo kwicandelo lenkcubeko yeeseli, izinto ezisetyenziswayo, isampula yolwakhiwo lwethala leencwadi kunye nezixhobo zokuxilonga.
Izisombululo ze-swab zokucoceka: i-swab ye-foam ecocekileyo, i-polyester swab, i-microfiber swab, njl njl.
Ngenxa yentsebenziswano esondeleyo namaziko amaninzi ophando ekhaya nakwamanye amazwe, uninzi lweemveliso zethu zine-CE, FDA, ISO13485, ukuthunyelwa kwamanye amazwe iziqinisekiso zemveliso yezonyango, uvavanyo lweBiocompatibility kunye nengxelo yeSGS. Ngaphandle koko, senza iinzame ezinkulu zokuphuhlisa iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Ukuthobela umgaqo woshishino weenzuzo ezifanayo, siye saba nodumo oluthembekileyo phakathi kwabathengi bethu ngenxa yeecervices zethu zobungcali, iimveliso ezisemgangathweni kunye namaxabiso akhuphisanayo. Siyakwamkela iOEM kunye neodolo yeODM.
Ukuba unemibono emitsha okanye iikhonsepthi zeemveliso, nceda uqhagamshelane nathi. Siyavuya ukusebenza kunye nawe kwaye ekugqibeleni sikuzisele iimveliso zanelisekile.
J.able ezinikele ekuboneleleni ngezona mveliso zibalaseleyo, inkonzo egqwesileyo, eyona R&D, ukuphumeza iMveliso yoHlaza kunye neShishini lokuHlaza.
J.able, ukwazi ukuba yinkokeli kwilabhu enokulahlwa.
Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Buccal Swab Collection Kit, Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo,